Akụkọ - Enwere ikike maka ịzụ ihe eji eme ụmụaka. Ndị ọkachamara ga-akụziri gị otu esi ahọrọ ma zụta obere ụgbọ ala nke ọma
E nwere nkà maka ịzụta ihe eji azụ ụmụaka. Ndị ọkachamara ga-akụziri gị otu esi ahọrọ ma zụta obere ụgbọ ala nke ọma
Lekwasị anya na njirimara ngwaahịa na nchekwa, nye nnwere onwe izizi kachasị mma, ụlọ ọrụ nyocha kachasị ọkachamara, ọkwa ọkachamara kachasị elu, iji mepụta ndụ dị mma. Yabụ kedu ka ndị ahịa ga-esi azụta ndị stọọdụ ruru eru ma dịkwa mfe iji?
Onye nta akụkọ ahụ mere mkparịta ụka na-enweghị isi na ụfọdụ nnukwu ụlọ ahịa, ọtụtụ ụmụ amaala kwuru na ihe kachasị mkpa ị toa ntị na mgbe ị na-azụ ụmụ ọhụrụ bụ ịdị mma na nkasi obi nke ngwaahịa ndị a.
Ndị ahịa Nie gwara ndị nta akụkọ na ihe mbụ bụ wiilị. Ọ na-eche na ọ kwesịrị ịbụ mgbochi skid otu. Mgbe ahụ ọ ga-adịrị gị mfe ịnọdụ ala dinara ala, maka ụmụaka. Carsfọdụ ụgbọ ala nwere ọtụtụ azụ na n'úkwù, karịsịa mgbe ha dinara ala. Ọ ka mma inwe ọdụm n’okpuru ha.
Ma n'ji Nwada Li na-eche, na purchasezụ nwa e ji ebu ihe bụ n'ozuzu mbụ ọma, nwa, na ala akụkụ. Ọ dị jụụ ịnọdụ ala. Naanị ịkwanye nwatakịrị ahụ.
“Anyị kwesịrị ị paya ntị na nsogbu mma. Ọnụahịa ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya, ogo dị mma, na arụmọrụ ọnụahịa dị elu. Ihe a kapịrị ọnụ bụ ị paya ntị na nchekwa, ọ ghaghị ịdị ike, nwa ahụ nọ na ya adịghị mfe ịda. ”Consumer Nwada Wang kwuru.
Ndị ọkachamara gwara ndị ntaakụkọ na ndị nne na nna kwesịrị ibido ụzọ dị ka afọ ụmụaka si dị iche iche iji zụta strolla.
Nwa ahia Baby na-ere ahịa Zhang Ying gwara ndị nta akụkọ na ọ bụrụ na ọ bụ nwa amụrụ ọhụrụ, ọ kwesịrị ịrụ ọtụtụ ọrụ, dina ala azụ ma nọdụ na ụgbọ ala nwere ọtụtụ ọrụ, baara uru maka uto ụmụaka. Mgbe ọnwa isii gachara, ebe a ga-ebu ibu. Nwere ike ịhọrọ ịnọrọ naanị gị kama ị dinara ala, n'ihi na ụra anaghị atụ ya n'oge ahụ. Mgbe ahụ ọ bụrụ na ọ dị ihe dịka otu afọ, gbanwee na obere igwe eletrik atọ, nwere ike ịnya ịnyịnya nwere ike ịnọdụ ala, na-enye aka maka uto ụmụaka.
Ndị ọkachamara kwuru na ụgbọ ịnyịnya ụmụaka dị mma enweghị ọnụ ọnụ, ndụmọdụ na mgbapụta na mpaghara ndị ụmụaka nwere ike ịnweta. N'otu oge ahụ, ụfọdụ protrusions kwesịrị ịnwe ụlọ ọrụ nchekwa dịka eriri nchekwa na sponge pads.
“Dị ka ụmụaka, ha na-enupụ isi karị ma na-elegharị anya n'ụgbọala. Ọ bụrụ na enweghị eriri nchekwa, ọ na-adịrị nwatakịrị ahụ mfe ịda n'ụgbọala. Ma enwere eriri ogbo na oche interface oche a na-ejikwa ya maka nchebe. Ọ bụrụ na ọ siri ike, ma ọ bụ dị jụụ, ma dịkwa mfe imeghe, ọ ga-enwekwa mmetụta ụfọdụ n'ahụ ahụ nwa ahụ bụ Heze City Industry and Commerce Bureau ikike ndị ahịa na ngalaba nchekwa ọdịmma onye otu Shan Liang kwuru.
Ndị ọkachamara kwenyere na ndị nne na nna kwesịrị ịgbalịkwuo na saịtị iji hụ ma ahụ ụgbọ ala ha siri ike ma buru ibu ahụ. Iri arọ nke ahụ bụ, ọ na - adịwanye nchebe ma dịkwa nchebe. N'otu oge ahụ, taya nke ihe eji ebu nwa ọhụrụ kwesịrị ịnwe absorption, braking na ọrụ ndị ọzọ.